अपरेसन गरेर बच्चा निकाल्ने तयारी गर्दैगर्दा गयो गीताको ज्या’न – Rapti Khabar
अपरेसन गरेर बच्चा निकाल्ने तयारी गर्दैगर्दा गयो गीताको ज्या’न
कात्तिक १४, बुटवल, सुत्केरी बेथा लागेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएकी महिलाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा मृ’त्यु भएको छ।
सुत्केरी बेथा लागेर भर्ना भएकी गुल्मी मदाने गाउँपालिका ३ भुजुङ्गेकी ३० वर्षीया गीता पुरीको बिहीबार साँझ गर्भको शिशुसहित मृ’त्यु भएको हो।
उनी सुत्केरी बेथा लागेर बिहीबार दिउँसो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। मृतक गीताका देवर युद्ध पुरीले अस्पतालको लापरबाहीले भाउजू र बच्चा दुवैको ज्या’न गएको बताए।
अस्पताल भर्ना भएपछि चेक गर्दा नर्मल डेलिभरी हुन्छ भनिए पनि पछि एकाएक आमा र बच्चाको ज्या’न गएको उनले बताए।
पुरीका अनुसार चिकित्सकले दिउँसो ४ बजे चेक गर्दा बच्चा र आमा दुवैको अवस्था सामान्य रहेको बताए पनि साँझ ७ बजे पेटभित्रै बच्चाको मृ’त्यु भएको बताएका थिए। त्यसको २ घण्टापछि आमाको पनि मृ’त्यु भएको चिकित्सकले आफन्तलाई जानकारी गराएका थिए।
मृ’तक गीताले डा. अनुपा थापासँग नियमित गर्भ परीक्षण गर्दै आएकी थिइन्। चिकित्सकले गीतालाई कात्तिक ८ गते सुत्केरी हुने मिति तोके पनि चिकित्सककै सल्लाह बमोजिम १३ गते अस्पतालमा भर्ना भएको आफन्तले बताएका छन्।
यसबीचमा पनि गीता चिकित्सक थापासँग नियमित सम्पर्कमा रहेको परिवारले बताए।
अस्पतालका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमले महिलालाइ सुत्केरी बेथा लगाउने औषधि दिएको नर्मल डेलिभरी हुने देखेर केहीबेर छाडिएको बताए। तर ५ बजेपछि महिलामा अचानक श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको र अपरेसन गरेर बच्चा निकाल्ने तयारी गर्दैगर्दा मृ’त्यु भएको उनले बताए।
तर मृ’तकका आफन्तले भने अस्पताल भर्ना भएपछि आमा र बच्चा दुवैको मृ’त्यु हुनुमा अस्पतालको ग’म्भीर ला’पर’बाही भएको आ’रोप लगाएका छन्।
मृ’तकका आफन्तले घटनाको नि’ष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। अहिले मृ’तकको श’व अस्पतालभित्रै छ। मृ’तकका आफन्तले शुक्रबार बिहान अस्पतालमा केहीबेर प्र’दर्शन समेत गरेका थिए।
अहिले अस्पताल प्रशासन र मृ’तकका आफन्तबीच अस्पतालमा छलफल चलिरहेको छ।
अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर नेत्र रानाले भने, ‘अस्पतालमा जुन घट’ना भयो त्यो दु:ख’द हो। अहिले घटनाबारे मृ’तकका आफन्तसँग छलफल चलिरहेको छ।’
गीताको यसअघि चार वर्षको छोरी छन्। पहिलो छोरी नर्मल डेलिभरीबाट जन्मिएको हो।
आज २०७७ कात्तिक १३ गते विहिबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
Posted on October 28, 2020 Author Rapti Khabar
नेपालको इन्टरनेटमा देखियो यस्तो चमत्कार, अब के होला ?
भदौ २२, काठमाडौँ-इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु (आइएसपान)ले इन्टरनेटको स्पीड स्लो हुनुमा आफूहरुको मात्रै कमजोरी नभएको बताएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)नेपालले गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनीहरुले विदेशबाट ल्याउने व्यान्डविथ, विभिन्न सर्भर र मोबाइल एप लगायतमा आउने समस्याका कारणले गर्दा समेत इन्टरनेट स्लो हुन सक्ने बताएका हुन्। अन्तरक्रियामा सुबिसु केवल नेट प्रालीका सीईओ विनयमोहन साउदले भारतका […]
किन भत्काइयो गोंगबुको आकाशेपुल ? हेर्नुस
कोरोना संक्रमण, कोभिड, सीटी भ्यालु, पुनः संक्रमण, एन्टीबोडी र खोपबारे जान्नैपर्ने यी तथ्य